- Ingxenye 5
Yini okufanele ngiyinake ngohlelo lwangaphakathi lokuhlanza lomshini wokumaka?
Imishini yokumaka imigwaqo Eminye imishini yokumaka ifakwe uhlelo lokuhlanza oluzenzakalelayo, olungasula ngokushesha uhlelo lwamapayipi ngemuva kokuphothulwa komsebenzi ngamunye, ukuze ikwazi ukonga isikhathi esiningi sokuhlanza. 1. Isistimu yobuhlalu beglasi: Izinkampani ezijwayelekile zokulungiswa komgwaqo kufanele futhi zibheke i-configu ...
Ungawususa kanjani umugqa wokumaka ngokudubula ukuqhuma？
Indlela yokuqhumisa indlela yokuqhumisa isebenzisa imishini yokuqhumisa ukuze isuse ukumaka. Isimiso sayo sokusebenza yileso: imoto iqhuba umzimba we-impeller ukuthi ujikeleze, uthembele emandleni we-centrifugal, umshini wokuqhumisa umjikijela uphonsa impahla yokudutshulwa (i-steel shot noma isihlabathi) kwi-sur yokusebenza ...
Ukungaqondi kahle imodeli eshisayo encibilikayo yokumaka umshini
Amakhasimende amaningi angakawuthinti umshini wokumaka oshisayo-melt ngokuvamile anokungaqondi kangangoba acabanga ukuthi umshini wokumaka oshisayo uyafana nesifutho esibandayo ekamelweni lokushisa, inqobo nje uma kunomshini wokumaka oshisayo. Kodwa-ke, isimo sangempela ukuthi i-hot-m ...
Imibuzo ebuzwa njalo ngomshini wokumaka izingxenye ezimbili
Imishini yokumaka imigwaqo iyimishini edingekayo yokuhamba emgwaqeni, futhi ukumakwa komgwaqo kufanele kugcinwe njalo ukuqinisekisa inqubekela phambili ehlelekile yethrafikhi. Namuhla, ithrafikhi nawo wonke umuntu bazophendula imibuzo ejwayelekile ngomshini wokumaka umgwaqo. Ungakuxazulula kanjani ukuphikelela kwamamaki aqhakaze kakhulu ...
Uyini upende wokumaka umgwaqo we-thermoplastic?
Okuluhlaza okwenziwe nge-thermosetting resin synthetic, extender pigments kanye ne-fillers, plasticizers nezinye izithasiselo. Ukusebenza nokusetshenziswa kokumaka ebusweni bomgwaqo Upende uyafafazwa. I-www.youqi365.com izosatshalaliswa ngokulinganayo ngokuya ngesilinganiso ngesikhathi sokwakhiwa, zofuzo ...
Ukuqhathanisa nobunzima bokumaka izingxenye ezimbili nokwakhiwa kopende obandayo
Ngokuya ngezindlela ezahlukahlukene zokwakha, upende wokumaka wezinto ezimbili uvame ukwakha izinhlobo ezine zokumaka: ukufafaza, ukuklwebha, ukumaka nokuhleleka kwesakhiwo. Uhlobo lokufafaza ngupende obandayo osetshenziswa kakhulu. Upende obandayo unezici zejubane lokwakha okusheshayo, i-constr elula ...
Upende onjani wokumaka umgwaqo?
Upende wokumaka umgwaqo uhlobo lopende osetshenziswa kakhulu emizileni yezimoto. Abantu abaningi abazi okuningi ngalolu hlobo lopende. Upende onjani wokumaka umgwaqo? Upende onjani wokumaka umgwaqo? Uchungechunge lokumaka umgwaqo, kufaka phakathi uhlobo olujwayelekile lokushisa kuphela kanye ne-hot-melt r ...
Izici zokusebenza kwezimoto ezigeza imigwaqo ezinengcindezi enkulu
Iloli eligeza ngesandla liyimoto engenamvelo eyenzelwe ukugeza umgwaqo. Ingasetshenziselwa ukuwasha nokuhlanza ngokushesha imigwaqo yasemadolobheni, imigwaqo esizayo, namatshe amatshe okwakha, kanye nokuhlanzwa kwesikhangiso esincane sasemadolobheni, umgqomo kadoti nodoti wokuwasha.
Umehluko phakathi kokumakwa komgwaqo umshini wokufafaza obandayo nokuncibilika okushisayo?
Umehluko ophakathi kokumaka umgwaqo obandayo nokuncibilika okushisayo uhlukaniswe: ukumaka upende, isilinganiso, imishini ejwayelekile kanye nenqubo yokwakha.